अर्चना पनेरु आमा-छोरी मिलेर बाथरुममा बनाएको भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक -भिडियो हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > अर्चना पनेरु आमा-छोरी मिलेर बाथरुममा बनाएको भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक -भिडियो हेर्नुहोस
admin February 22, 2019 समाचार 0
काठमाडौं । कुनै बेला नेपालमा अर्चना पनेरु नाम खुबै चर्चामा रहेको थियो । अहिले नेपालमा पोर्न ब्यान भएपछि अर्चना पनि ब्यान भएको कुरा बाहिर आएको थियो । तर, हालै उनैं अर्चनाको एक अश्लील भिडियो बाहिर आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा नग्न फोटो राख्ने अर्चना पनेरुले आफ्नो न्यूड भिडियो सार्वजनिक गरेकि छिन् ।
केहि समय अघि फेसबुकमा नग्न फोटो राखेका कारण प्रहरी चौकी पुगेकी उनले अव आइन्दा यस्तो क्रियाकलाप नगर्ने उल्लेख गरेको भएपनि यू ट्युब मार्फत नयाँ नग्न भिडियो सार्वजनिक गरेकि हुन् । पनेरुले नग्न भिडियो सार्वजनिक गर्नू पूर्व उनकी आमाले समेत नग्न फोटो सूट गरेकी थिइन् ।
आमाले फोटो र भिडियो सुट गरिदिने गरेको बताउने अर्चनाले आफू कुनै पनि हालतमा पेर्न स्टार बनेरै छाड्ने बताइसकेकी छिन् । यू ट्युवमा सार्वजनिक गरिएको उनको नयाँ भिडियो १ मिनेट ४७ मिनेटको रहेको छ । बाथरुमामा सुट गरिएको भिडियोमा उनी कलेज ड्रेसमा छिन् । अर्चना पनेरु १०० प्रतिशत नाम दिइएको भिडियो युट्युबमा भाइरल भइरहेको छ । केहि समय अघि फेसबुकमा नग्न फोटो राखेका कारण प्रहरी चौकी पुगेकी उनले अव आइन्दा यस्तो क्रियाकलाप नगर्ने उल्लेख गरेको भएपनि यू ट्युब मार्फत नयाँ नग्न भिडियो सार्वजनिक गरेकि हुन् ।
पनेरुले नग्न भिडियो सार्वजनिक गर्नू पूर्व उनकी आमाले समेत नग्न फोटो सूट गरेकी थिइन् । आमाले फोटो र भिडियो सुट गरिदिने गरेको बताउने अर्चनाले आफू कुनै पनि हालतमा पोर्न स्टार बनेरै छाड्ने बताइसकेकी छिन् । ट्युवमा सार्वजनिक गरिएको उनको नयाँ भिडियो १ मिनेट ४७ मिनेटको रहेको छ । बाथरुमामा सुट गरिएको भिडियोमा उनी कलेज ड्रेसमा छिन् । अर्चना पनेरु १०० प्रतिशत नाम दिइएको भिडियो युट्युबमा भाइरल भइरहेको छ ।
केहि समय अघि फेसबुकमा नग्न फोटो राखेका कारण प्रहरी चौकी पुगेकी उनले अव आइन्दा यस्तो क्रियाकलाप नगर्ने उल्लेख गरेको भएपनि यू ट्युब मार्फत नयाँ नग्न भिडियो सार्वजनिक गरेकि हुन् । पनेरुले नग्न भिडियो सार्वजनिक गर्नू पूर्व उनकी आमाले समेत नग्न फोटो सूट गरेकी थिइन् । आमाले फोटो र भिडियो सुट गरिदिने गरेको बताउने अर्चनाले आफू कुनै पनि हालतमा पोर्न स्टार बनेरै छाड्ने बताइसकेकी छिन् । यू ट्युवमा सार्वजनिक गरिएको उनको नयाँ भिडियो १ मिनेट ४७ मिनेटको रहेको छ । बाथरुमामा सुट गरिएको भिडियोमा उनी कलेज ड्रेसमा छिन् ।
अर्चना पनेरु १०० प्रतिशत नाम दिइएको भिडियो युट्युबमा भाइरल भइरहेको छ । केहि समय अघि फेसबुकमा नग्न फोटो राखेका कारण प्रहरी चौकी पुगेकी उनले अव आइन्दा यस्तो क्रियाकलाप नगर्ने उल्लेख गरेको भएपनि यू ट्युब मार्फत नयाँ नग्न भिडियो सार्वजनिक गरेकि हुन् । पनेरुले नग्न भिडियो सार्वजनिक गर्नू पूर्व उनकी आमाले समेत नग्न फोटो सूट गरेकी थिइन्
पशुपतिको अर्को गीत फेरि सामाजिक संजालमा भाइरल ! सक्दो शेयर गरौ !! (भिडियो)
उपत्यकामा थपिए यति धेरै कोरोना संक्रमित!